6 daqiiqado kalsooni ah ConstrucGeek - Geofumadas
Luulyo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Waxaan ku talineynaa in la qaato daqiiqad si aad u ogaato in blogga, oo imika socdaal ku imanaya sanad.
Waxaan u jeedaa ConstrucGeek, lixda daqiiqo ee aad rajeyneysey inaad ubaahan tahay inaad aqrisato mid cusub oo dhulfadheed waa inaad ku maalgelisaa blogkan.
Waxaa jira laba fursadood oo kaliya: inaad fahamsan tahay in mawduuca la xidhiidha injineerka uusan ahayn dantaada, ama aad ku dhamaatid in lagu daro kuwa ugu cadcad.
Si aad u muujiso boostada 6 ee AutoCAD Meel 3D
Fiiri AutoCAD Macaamiisha 3D 2010 - Dhaqdhaqaaqa dhexgalka
Talooyin si aad udhisid waxqabadka AutoCAD madaniga 3D
Buug-gacmeed si loo abuuro barnaamij leh AutoCAD Meel 3D
Ku rakibo AutoCAD ama 3D 2008 ee Windows Vista 64bit
Joogta si loo abuuro polyline ka soo Microsoft xogta Excel
Joogta oo soo jiidata baqshadda ballaaran ee curvaanka hal dhinac ah
Horay u sii soco
Post Previous«Previous Geo web Publisher, waxay u muuqataa mid fudud
Post Next Microstation: aragtida ma hayso scrollNext »
4 Jawaab in "6 daqiiqado la isku halleyn karo" ConstrucGeek "
waxay ku dhajiyeen cawska qorraxda isagu wuxuu leeyahay:
subax wanaagsan barnaamijku waa mid aad u wanaagsan oo waxaad kaliya u baahan tahay inaad iyaga ka dhigto iyaga doonaya inay horay u riixaan. ku celcelin, iyo ku celcelin dheeraad ah waxaan kula talinayaa dhamaan xirfadleyda warshadaha dhismaha mahadsanid
Veroniica isagu wuxuu leeyahay:
Miyuu suurtogal u yahay helitaanka / soo-dejinta dukumintiyada bandhiggan "Hirgelinta aasaasiga ah ee IDE node" oo leh barnaamij bilaash ah "wixii aan ugu dambeyntii awoodin inaan raacno? Salaan
Looma baahna in la mahad celiyo, waxaan halkaan u joognaa inaan iskaashi la sameyno. Salaan
Mario Torres isagu wuxuu leeyahay:
Hello G!, Mahadsanaanta maqaalkan, maantana, meeleeynta mashaariicda iyo CAD waa mid sii dhawaansho iyo dhowba, taas oo ah, tee khabarku ma aha cilmi kombuyuutar oo u adeegsanaya qalab si loo helo natiijooyin?
Tusaale ahaan, dhakhtarka ilkuhu ma aha mid ku lug leh isticmaalka qalabkaaga ilkahaaga? ama laga yaabee dhaqaaleyaha leh barnaamijyo dhaqaale oo qaar.
Taasna waxaan uga mahadcelineynaa tan iyo markii aan ka faa'iideysanay CAD si aan u helno natiijooyinka ugu wanaagsan iyo wakhtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Thanks to blogs iyo forumska shabakada, qalabkan sii kordhaya si aan loo garanayn qof walba, si loo wadaago aqoonta, dhammaan waxa ay ka tagtaa dareenka ah ee ka soo baxaya burcad yar oo caano ah oo ku taal badda badda aqooneed.
Salaan iyo hambalyo aad blog.